Jobs at Yadanar More and More Family Group of Companies Limited | MyJobs
/ Jobs at Yadanar More and More Family Group of Companies Limited | MyJobs
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော လက်ဝတ်ရတနာအရောင်းဆိုင်တွင် အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ယူ ...
An Assistant Accountant supports the Accountant in completing basic bookkeeping, clerical and accounting tasks foracompany.
An Assistant Accountant supports the Accountant in completing basic bookkeeping, clerical and ac ...
About Yadanar More and More Family Group of Companies Limited
Yadanar More and More Family Group of Companies Limited isaMyanmar-based company that operating goldsmith with modern technology and distributing quality diamond and white gold jewelries to the wholesale and retail market throughout Myanmar. The purpose of the company is to provide the qualified Belgian diamond and international standard white gold jewelries with the best service in Myanmar jewelry market.
Itstarted opening More and More Gold and Jewelry showroom at Bogyoke Aung San Market in February, 2008 and selling white gold jewelry. Expansion galleries have been expanded to provide greater customer service and easier access to customers anytime and anywhere. Nowadays seven galleries have been opening at Bogyoke Aung San Market, Junction City Shopping Mall, Lanmadaw Plaza, Taw Win Center, Gamone Pwint (San Yeik Nyein) in Yangon, Ocean Center (Mingalar Mandalay) in Mandalay and Ocean Center in Mawlamyine.
Starting goldsmith work from 2015 February with the aim of creatingasuperior quality jewelry backed by advance qualified & experienced jewelry designers & production team, manufacturing units equipped with the modern technologies. The company constantly strive to achieve innovative modernized design & superior quality and jewelries for jewelry lovers.
Yadanar More and Moe Family Group of Companies Limited dedicates to developingaleading company has been providing full qualified jewelry with excellent service in diamond and white gold jewelry industry in Myanmar.
ရတနာမိုးနှင့်မိုးမိသားစု ကုမ္ပဏီများအုပ်စုလီမိတက် (Yadanar More & More Family Group of Companies Limited)သည် စိန်ထည်နှင့် ရွှေဖြူလက်ဝတ်ရတနာများကို လက်လီလက်ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော လုပ်ငန်းနှင့် စက်ပန်းထိမ်လုပ်ငန်းတို့ကို
လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်သော မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်အသွေး ပြည့်ဝကောင်းမွန်သော ဘယ်လ်ဂျီယံစိန်ထည်များနှင့် ရွှေဖြူလက်ဝတ်ရတနာထည်များအား မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
“More & Moreစိန်ထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်”အမည်ဖြင့် (၂၀၀၈)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးသစ်”တွင် အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချကာ ပလက်တီနမ်(ရွှေဖြူ)လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းသို့ စတင် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါသည်။ ၀ယ်ယူသူ ဖောက်သည်ကြီးများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်နှင့် အချိန်နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် အရောင်းပြခန်းများအား ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး၊ Junction City Shopping Mall, လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ တော်ဝင်စင်တာနှင့် ဂမုန်းပွင့်(စံရိမ်ငြိမ်)အရောင်းစင်တာတို့တွင် လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမြို့ရှိ Ocean Center(Mingalar Mandalay)တွင်လည်းကောင်း၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Ocean Centerတို့တွင် လည်းကောင်း အရောင်းပြခန်း(၇)ဆိုင် ဖွင့်လှစ် ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
ရတနာချစ်သူများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ပြိုင်ဘက်ကင်း ခေတ်မှီဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများကို ရတနာချစ်သူများစိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အဆင့်မြင့် စက်ပန်းထိမ်လုပ်ငန်းကို ( )ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီစက်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သည့် ဝါရင့်ပန်းထိမ်ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်၍ တီထွင်ဖန်တီးပေးလျက်လည်း ရှိပါသည်။ Yadanar More & More Family Group of Companies Limitedသည် စိန်နှင့်ရွှေဖြူ လက်ဝတ်ရတနာလောကတွင် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးပြည့် လက်ဝတ်ရတနာထည်များကို ဖြန်ဖြူးရောင်းချ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသော ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်စေရန် ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။